May 15, 2021 5075
निराजन घिमिरे, वैशाख ३१, चितवन – आफ्नै भाईबहिनि संग खेल्दा खेल्दै सलको पासो लागेर चितवनमा एक बालि`काको ज्या`न गएको छ । चितवन जिल्ला रत्ननगर नगर`पालिका वार्ड नं. १६ दोबाटो बजारमा डेरा`गरी बस्ने संगीता सु`नुवार कि ८ वर्षिया छोरी संजिता सुनुवारको सलको पासो लागेर ज्या`न गएको हो ।
शुक्र`बार बिहान करिब ९:३० बजे घटना घटेको घरबेटी ईश्वर श्रेष्ठले बताए ।“३ जना बालबालिका आफ्नै कोठामा खेलिरहेका थिए । बालिकाकी आमा शौचालय गएकी थिइन् ।” त्यति नै बेला घ`टना घटेको संगै डेरा गरि बस्ने महिलाले उज्यालो नेपाललाई बताईन् ।
पलंग संगै रहेको झ्या`लको रडमा सल अड्काएर खेल्दैगर्दा पलंग बाट चिप्लिएर घट`ना घटेको हुन सक्ने इलाका प्रह`री कार्यालय टाँडीका प्रहरी नायव उपरिक्षक ईन्द्र बहादुर रानाले जानकारी दिए ।
घाँटीमा पासो लागेर घाइ`ते भएकी बालिकालाई उप`चारको लागि चितवन मेडि`कल कलेज भरतपुर लगिएको भएपनि उनको मृ`त्यु भएको प्रह`रीको भनाई छ । बालिकाको श|वलाई पो`ष्टमार्टमको लागी भरत`पुर अस्पतालमा राखिएको छ!
स्थायी घर धादिङ्ग`को मैदी रहेको सुनुवा`र परिवार केहि वर्ष अघिदेखि पिठुवा दोबाटोमा डेराग`री बस्दै आएको स्थानीयले बताए। बालिकाको बाबु रोजगारीको क्रममा भारतमा रहेका छन् ।
सुनुवार परिवारको आर्थि`क अवस्था निकै कमजोर रहेको र उनीहरूको आफन्त पनि यँहा कोही नरहेको वडा`ध्यक्ष हेमराज थापाले बताए। सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शवको अन्तिम संस्का`रको लागी वडाध्यक्ष थापा आफै खटिएका छन्।उज्यालो नेपाल बाट
Prevआज अमेरिकी डलर सहित अरु विदेशी मुलुकको मुद्राको विनिमय दर यस्तो छ:
Nextआमाको कोरोनाका कारण मृ`त्यु भएपछि छोराले पनि भिर`बाट हामफालेर प्राण त्यागे
चितवन घट’नाको अन्तिम फैसला- रञ्जनालाई कैद, २१ लाखबढी रविको परिवारलाई दिनुपर्ने (भिडियोसहित)
भोलि जेठ ३ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
बाटोमा माग्न बस्ने कतिपयले हामीलाई यसरी उल्लू बनाइरहेका हुन्छन् (हेरौं यो छक्क पार्ने भिडियो)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (79348)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (58870)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (58423)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (53710)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (50637)